इटालियन महिला सुन्दर छन्, तिनीहरूले भीषण छन्, र आगोको छन् जस्तै कुनै अन्य महिला. मलाई थाहा छ यो अनुभवबाट, म बाँच्न प्रयोग लागि त्यहाँ वर्ष को एक जोडी, र म थियो डेटिङ मा महिला इटाली लागि सारा समय छ । र मलाई के बताउन वर्ष को एक जोडी थियो. जस्तै म महसुस, म एक पुस्तक लेख्न सकिन्छ वा दुई मा मेरो दिन त्यहाँ छ । यो आकर्षक, रोचक र मजा. तर आज, स्टार्टर्स लागि, म बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु इटालियन एकल महिला र कसरी मिति.
र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, इटाली, महिला आनन्द मातृत्व. कति थकित आमाबाबुले म देख्न मा हाम्रो खेल को मैदानों? थकित देखि मात्र दैनिक तालिकामा तर पनि देखि छोराछोरीलाई । तर यहाँ यो फरक छ । एक बच्चा छ एक निरन्तर छुट्टी, लाग्यो सबै नातेदार । तिनीहरूले धेरै सुशील छ । विशेष गरी उत्तर मा. विशेष गरी मिलान । तिनीहरू आफ्नै लागि मापदण्ड फैशन क्षमता — प्रत्येक प्रकार को कपडे हुनुपर्छ को एक निश्चित ब्रान्ड र एक निश्चित रंग । तिनीहरूले रुचि छैन पनि उज्ज्वल टन हुनत. लागि कुनै पनि इटालियन, परिवार सबै छ । यसको समय अतिप्राचीन भएकोले, र अब यो आर्थिक अधिक लाभदायक हुन परिवार संग. वर्ष पहिले, को औसत संख्या छोराछोरीलाई मा एक इटालियन परिवार थियो । अब यसको नजिक युरोपेली मान्यता छ । अझै तिनीहरूले अझै पनि मायालु तथा भावुक बारेमा आफ्नो नजिक हुन्छन् । बहस संग एक मानिस मा सार्वजनिक निषेध छ । महिलाहरु को लागि, यो अझै पनि एक मानिन्छ खराब टोन । र सबै स्पष्ट छन् मा घर । बन्द ढोका पछि. र सबै भावनात्मक दृश्य देख्न सक्छन् भनेर सडक मा — यो सिर्फ एक खेल (तिनीहरूले हो जन्म). राम्रो हुनुको, एक अमेरिकी, आफैलाई बीच केही मतभेद छन् महिला मा अमेरिकी र महिलाहरु मा इटाली, र यहाँ छन् बस तिनीहरूलाई केही छ । रही उनको फोन: एक अमेरिकी केटी छ, यो प्राप्त गर्न सजिलो छ उनको नम्बर भने त्यो ठान्नुहुन्छ तपाईं संग बाहिर लागिरहेको छ । यो एकदम कठिन जब तपाईं डेटिङ गर्दै महिला इटाली मा, तपाईं लागि काम गर्न छ । बाहिर जा: एक मौका छ कि एक अमेरिकी केटी आमन्त्रण हुनेछ तपाईं कहीं. एक इटालियन केटी छैन, कुनै तरिका छ । तपाईं गर्न अग्रसर छ ।: एक अमेरिकी केटी धेरै छ, यो बाटो मा, त्यो धैर्य छ । अझै इटालियन बालिका गर्न चाहनुहुन्छ कसरी टाढा हेर्न तपाईं हुनेछ लागि जाने गर्दछन् । रसिद: यो छ अधिक साधारण को लागि एक अमेरिकी केटी लागि तिर्न आफु. अझै एक इटालियन केटी छैन, कम से कम केही समय को लागि (केही पहिलो तिथिहरु). बेमतलबको जिस्क्याइले छ: यो गर्न धेरै सजिलो छ संग इश्कबाज एक अमेरिकी केटी छ । यी बालिका छन् धेरै ज्यादा रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्भव भने, हामी तिनीहरूलाई तुलना गर्न इटालियन बालिका । ओह मेरो, तपाईं एकदम राम्रो यो मा, धेरै राम्रो मा बेमतलबको जिस्क्याइले प्राप्त गर्न एक इटालियन केटी चासो छ । के एक इटालियन सुन्दरता जस्तै हेर्न? उनको अनुहार हुनुपर्छ सममित, गोलो आकारको संग, प्रमुख । पोटिलो ओठ, खैरो आँखा र व्यापक राम्रो- कालो । अधिक वफादार माग गर्दै भइरहेको गरे गर्न नाक देखि, भेट्टाउने, एक सफा सुग्घर नाक मा इटाली समस्याग्रस्त छ । यो सुन्दर गोलो छ द्वारा फ्रेम गाढा बाक्लो कर्ल को काँध-लम्बाइ गुमाउन, वा दूर मा एक आकस्मिक कपालको ढांचा । इटालियनहरू मूल्यांकन र सादगी गर्नुहोस् । लागि रूपमा रहनसहन भने, एक इटालियन महिला निर्णय गर्न प्रयोग रहनसहन, त्यसपछि पहिलो कुरा त्यो के हुनेछ मा ध्यान छ, आँखा छ । यस सन्दर्भमा, दक्षिणी महिला छन् विशेष गरी भाग्यशाली: आफ्नो समावेश बाक्लो कालो परेलाहरु छ । सामान्यतया तिनीहरूले अझै पनि अलिकति संग काजल । शरीर आकार को इटालियन बालिका वर्णन गर्न सकिन्छ एक शब्द मा: लोभलाग्दो छ । पछि दिन को पुरातन रोम, केही परिवर्तन भएको छ — प्रायद्वीप मा तिनीहरूले रुचि छैन पतली मान्छे । आदी को प्राचीन मूर्तिहरू र तथ्याङ्कले देखि कैनवस, आँखा चाहिन्छ केहि भन्दा बढी परिष्कृत एक शरीर संग यातना आहार. इटालियनहरू साँच्चै मूल्यांकन, त्यसैले प्रकारका उपयुक्त हुनुपर्छ: उच्चारण छाती, नाडी र नितम्ब, बिना अतिरिक्त. छाती छन् विशेष गरी सराहना सम्झना युद्ध को छाती को र जीना.
सायद यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रामाणिक हुन
हुन, आफैलाई को एक र मात्र । इटाली मा, जस्तै महिला स्टाइलिश मान्छे छ कि एक फैशन को अर्थमा र ह्यान्डल गर्न कसरी थाहा आफूलाई । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, कुरा कहिल्यै राजनीति र यस्तो. एक नियम को रूप मा, तिनीहरूले यो घृणा छ । इटालियन महिला जस्तै मान्छे के थाहा कि बारे कुरा गर्न र कुन उपयुक्त छ अझै आफ्नै राय बारेमा सबै छ । दयालु आफ्नो र उनको आमा देखि, इटालियन मान्छे को मूल्य को अर्थ शब्द पछि आमा एकदम धेरै, भरोसा, शैली, बुद्धिमत्ता यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा इटालियन महिला जस्तै पुरुष, विदेशी वा छैन । गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका यति छ छ एक साधारण कम्पनी को मित्र, वा, सायद, नातेदार । हुन को कम्पनी मा आफैलाई उनको र प्रेम देखाउन र आदर गर्न तपाईंको साधारण मित्र साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ. नडराऊ पुग्न को एक मा एक पल्ट वा पनि सडक मा, तिनीहरूले एकदम खुला झुकाउ यस्तो परिचितों, र, एक रूपमा शासन, छैन कुनै पनि समस्या को कुरा संग एक आकर्षक र रोचक सज्जन । अनि यदि पूरा गर्न वास्तविक जीवन मा एक विकल्प छैन, त्यसपछि थाहा छ कि एकदम केही छन् डेटिङ वेबसाइट विशेष को लागि बनाएको डेटिङ इटालियन महिला । सबै भन्दा राम्रो तरिका सुरु गर्न डेटिङ एक इटालियन एकल पूरा गर्न उनको मित्र । यो सबै भन्दा राम्रो छ प्राप्त गर्न थाहा इटालियन केटी मन पर्यो तपाईं को समयमा आफ्नो बैठक संग असल मित्र । पूरा नजिकका मित्र को केटी, बिस्तारै प्राप्त आफ्नो भरोसा. यो पहिलो कदम को हृदय गर्न आफ्नो प्रिय । यदि तपाईं को समर्थन मिल्यो उनको मित्र, प्रयास सोधेर एक मिति मा उनको छ । यदि तपाईं भाग्यशाली हो, यो सीमित हुनेछैन, एक बैठक छ । उनको व्यवहार संग एक पेय तर तिर्न पक्का हुन लागि पिउन. तर अब भने तपाईं अनुभव गर्दै छन् छैन भन्दा राम्रो पटक को मामला मा वित्त, अन्यथा के. यदि आफ्नो सम्बन्ध संग एक सुन्दर इटालियन महिला विकास, धेरै चाँडै लागि तयार हुन एक थकित जानकारी उनको आमाबाबुले संग. सबैभन्दा इटालियन मान्छे छैनन्, विशेष उत्साहित बारेमा कुरा गर्दा खाने संग आफ्नो आमाबाबुले. म निश्चित छु कि प्रायजसो परिवार खाने जस्तै खतरनाक छैन इटालियंस दाबी छ । सबैभन्दा संभावना, एक जोडी को पूल को लागि प्रतीक्षा गर्दै छन्, तपाईं पट्टी मा आफ्नो भविष्य. कहिल्यै, कहिल्यै, कुनै पनि परिस्थितिमा गर्नुपर्छ, तपाईं अनादर उनको परिवारका सदस्यहरू । यस मामला मा, तपाईं गर्नुपर्छ छैन पनि गम्भीर हुन, अन्यथा तपाईं नीरस बन्न सक्छ. प्रयोग हास्य को आफ्नो अर्थमा छ । यदि तपाईं पूरा इटालियंस इटाली, विचार क्षेत्रहरु बीचको मतभेद छ । लगभग हरेक क्षेत्र को इटाली यसको आफ्नै नियम छ र विश्वास छ ।, गर्छन अधिक होसियार हुन भन्दा आफ्नो उज्जवल दक्षिणी साझेदार । को यी मानिसहरू पनि फरक — पूर्व रुचि समुद्री र प्रकाश भाँडा, जबकि रुचि मासु र स्पेगेटी सस. छन् जबकि अधिक मानिसहरू इटाली भन्दा महिला छन्, अझै पनि एकदम केही इटालियन एकल महिला बस तपाईं को लागि प्रतीक्षा. इटाली मा, त्यहाँ छ एक सम्प्रदाय को परिवार । यो एक हुनुपर्छ छ इटालियंस लागि भेला गर्न बिदाहरू मा सारा परिवार संग वा भेट्न मित्र संग. प्रारम्भिक विवाह सामान्य हो, र, लागि सबै स्वभाव र को इटालियन मान्छे, परिवार सधैं राखे को मा. एक जोडी कि हरेक एकल दिन, संग प्लेट हालियो भइरहेको वरिपरि, तर बाँच्न सक्दैन, प्रत्येक अन्य असामान्य छैन: तिनीहरूले बाँच्न र त्यसपछि तलाकशुदा र त्यसपछि फेरि विवाह (एक क्लासिक उदाहरण छ चलचित्र विवाह इटालियन शैली संग र मार्सेलो). एक एकल महिला इटाली छैन परेशान, चोट वा खिसी गर्न । सबै भन्दा पहिले, उनको नातेदार, धेरै भाइबहिनीहरू सधैं उनको समर्थन छ, र दोश्रो, पुरुष राख्नु छैन उनको मा एक पार छ, भने पनि त्यो एक बच्चा छ । अनि सम्झना, कुनै सम्बन्ध छ, एक दुई-तरिका सडक, यति प्रयास छैन सम्झना गर्न मात्र शब्दहरू तर पनि गैर-मौखिक संचार — अर्थ, इशाराहरू, भावना । प्रतिक्रिया चाँडै पत्ता संकेत ।
← इटाली अनियमित आगन्तुक च्याट कोठा बिना दर्ता
इटाली च्याट →